Thenga i-11-Ketotestosterone powder (564-35-2) hplc =98% | I-AASraw
/ Imikhiqizo / Anabolics Steroids / I-Testosterone powder Series / 11-Ketotestosterone powder
SKU: 564-35-2. Categories: I-Testosterone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw inokukwazi ukwenza kanye nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugramu ukuya ku-11-Ketotestosterone powder (564-35-2), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
11-Ketotestosterone powder ifana ne-testosterone ye-hormone kodwa iyinkimbinkimbi eyenziwa ngokwemvelo njenge-androgen eyinhloko ezinhlanzi. Isakazwa kabanzi kulo lonke ubukhosi besilwane kanye nokusekelwa kokudla. Akuguquki ku-estrogeneven uma inomsebenzi onamandla we-anabolic ....
11-Ketotestosterone powder ividiyo
11-Ketotestosterone powder Izinhlamvu eziyisisekelo
Igama: 11-Ketotestosterone powder
Formula Yamamolekhula: C19H26O3
I-Melt Point: I-244-246 ° C
Umbala: powder emhlophe
I-11-Ketotestosterone powder emjikelezweni wezokwelapha
AmaBrama: 11-Ketotestosterone powder
Igama elijwayelekile: 11-Ketotestosterone powder uthenge, 564-35-2
Ukusetshenziswa kwe-11-Ketotestosterone powder
I-11-Ketotestosterone powder (I-CAS 564-35-2) isebenza emaphethelweni amabili ahlukene ngesikhathi esisodwa ukuze kube namaqabunga ahlukumezayo amafutha futhi ibeka umzimba ibe yi-anabolic overdrive. I-anabolic eyenzeka ngokwemvelo etholakala emlandweni kubantu njengemetabolite yamahomoni adrenal futhi futhi i-androgen eyinhloko enhlanzi eyenza ibe khona ekunikezeni ukudla. Isebenza ngaphandle kokuguqulwa, ayikwazi ukusebenza kahle, futhi njenge testosterone ngokuqinile, ivuselela i-androgen receptor. Iyanciphisa amazinga e-cortisol ekukhusheni kwamafutha nasesibindi ngenxa ye-inhibitor eqinile nekhethiwe yomsebenzi we-reductase we-11β-HSD1. Amazinga aphezulu ama-cortisols kulawo mathambo ahlotshaniswa nezimpawu ze-syndrome ye-metabolic, njengokwenyuka kwe-glucose production, differentiation adipocyte, ukukhuluphala okuphakathi, nokumelana kwe-insulin. Kuyasiza ekwenzeni izinsizakalo futhi kusiza ngokulahlekelwa ngamafutha ngenkathi kugcinwa amandla nobuhlungu. Kufanelwe njenge-"recomp" agent yokulahlekelwa kanye nama-fat muscle kanye nokuthola amandla.Lokhu kuphelile kokubili abaqalayo nabaqeqeshi bomzimba futhi nakho kungcono ukusika imijikelezo. I-KT-11 ingasiza ekungezeni ngamathani emisipha emisha futhi izoshisa amafutha angaphezu kweso ngokushesha ukwenza imisipha ibonakale ibukeka ngendlela ephelele futhi enhle.
Indlela i-11-Ketotestosterone powder esebenza ngayo
I-11-Ketotestosterone powder njenge-androgen enamandla ikhiqizwa izinhlanzi zesilisa ngaphezu kwe-testosterone. Esivivinyweni esedlule, i-juvenia catfish (i-Clarias carepinus) yabonisa ukuthi akuyona i-testosterone kodwa i-11-Ketotestosterone powder eyenza i-spermatogenesis. I-testosterone ngakolunye uhlangothi, ukuthuthukiswa kwe-pituitary gonadotroph esheshayo.
Imininingwane ye-synthesis ye-11-Ketotestosterone powder ayisaziwa ngabantu. Ukucaciswa kokukhiqizwa kanye nezakhiwo ku-11-Ketotestosterone powder kubantu kuyinjongo enkulu yalolu cwaningo. I-gonads yabantu yaphenywa ngenkulumo ye-cytochrome P450 ne-11beta-hydroxysteroid dehydrogenase izinhlobo ze-1 ne-2 eziyi-enzyme ezibalulekile ezibandakanya ukuhlanganiswa kwe-11-Ketotestosterone powder. Ukwenziwa kwe-11-Ketotestosterone powder kwaphenywa ngamaseli we-Leydig. Kusuka ku-10 abesifazane namadoda e-10 enyaka yokuzala, izingxube ze-plasma ze-testosterone zalinganiswa. Amaseli e-MCF-7 aphethwe umdlavuza webele we-Breast asetshenziselwa ukuphenya kwezakhiwo zawo. Imiphumela yokugcina ikhombisa ukuthi i-11-Ketotestosterone powder ikhiqizwa ku-gonads futhi ibonisa i-androgen enkulu kubantu futhi ingase isebenze njenge-androgen engenakuqhathaniswa.
Olunye ucwaningo lubonise ukuthi amazinga aphezulu avela ku-11beta-HSD1 inkulumo ayehlotshaniswa namandla aphansi emisipha kumadoda amadala. I-11-Ketotestosterone powder ibe yisimiso se-11beta-HSD1, i-11-KT ingakwazi ukuvimbela ngisho nokuguqula ukulahlekelwa kokudala kwamandla emisipha. Imiphumela ibonisa ukuthi ngokusetshenziswa kwe-11-KT, abagibeli besikhathi esidala bangagcina amandla noma babuyisele amandla alahlekile ngenxa yokuguquka kwesimo seminyaka esihlobene nokudala.
Izinzuzo ze-11-Ketotestosterone powder
Lesi sithako siyaziwa ngezimpahla ezilahlekile zokulahlekelwa kwamafutha. Lokhu kuphelele kokubili kokuqala kanye nabanolwazi abanokuhlangenwe nakho ekwakheni umzimba futhi kubhekwe kahle ekujikelezeni imijikelezo. Lesi sithako singcono kulabo abafuna ukulahlekelwa amafutha futhi bathole amandla. I-11-Ketotestosterone i-powder ingasiza futhi ama-bodybuilders ukwengeza amathani emisipha futhi abe nesimo esingcono kakhulu.
I-11-Keto-Testosterone ayiyona i-steroid enamandla kakhulu kodwa ingenza ukwengeza okuhle kumjikelezo wokusika lapho umuntu engakwazi ukulahlekelwa amafutha futhi anciphise i-cortisol. Ngakho-ke, emazweni lapho kusemthethweni khona, kuhloniphekile gcina into esiza ukulingana kobukhulu kusukela emjikelezweni ojwayelekile wezinye i-steroids. Umthamo womlomo ojwayelekile kufanele ube yi-200-300mg ngenkathi i-transdermal ingaba yingxenye yehora. Injectable, kungcono ukuhlanganiswa ne-ester futhi isetshenziswe ku-400mg ngesonto kuhlanganise ne-withoether cutting cutting steroids njengo-Anavar noma i-Masteron.
Isilinganiso se-11-Ketotestosterone powder (i-CAS 564-35-2)
Lesi sithako sinamandla kakhulu kodwa singenza nokwengeza okukhulu emjikelezweni wokusika lapho umuntu efisa ukulahlekelwa amafutha futhi anciphise i-cortisol. Kwamanye amazwe lapho kubhekwa khona ngokomthetho, kuyinto ehloniphekile yokugcina isitoreji esisiza izinga jikelele lobukhulu kusukela emjikelezweni ojwayelekile wesinye isitifiketi. Ngomlomo, umthamo ojwayelekile kufanele ube yi-200-300 mg ngenkathi ingxenye yalokhu i-transdermal ngosuku. Ukusetshenziswa kwe -jectject, kungcono kuhlanganiswe ne-ester ngomthamo we-400 mg ngesonto kanye namanye ama-steroids wokusika, i-Anavar noma i-Masteron njengesibonelo.
Imiphumela emibi ye-11-Ketotestosterone powder
Njengoba sesivele i-metabolite ye-testosterone, i-11-Ketotestosterone powder iyinqabile ngokumelene nomzimba. Ayikwazi ukuguqula ibe i-estrogen noma i-DHT. Inephrofayili yempikiswano enomkhawulo kakhulu eyenza kube kuhle kulabo abangenakuzwa imiphumela emibi ehlanganisa ukulahlekelwa kwezinwele nezinkinga ze-estrogenic. Akukona futhi ukuthi i-methylated yingakho engabangeli ukucindezeleka kwesibindi kungakhathaliseki ukuthi injected noma inqubo yomlomo yokudla. I-11-Ketotestosterone powder inokulula kakhulu ukuphatha iphrofayili yempembelelo yecala, yenza kube enye ye-steroids ephephile ukuthi umuntu angayisebenzisa.
Ukuthengiswa kwe-11-Ketotestosterone powder
Ukuthenga kanjani i-11-Ketotestosterone powder kusuka ku-AASraw
I-11-Ketotestosterone i-powder Recipes
I-testosterone Cypionate (i-test cyp) i-powder